Ihembe lesitolo esidayisa yonke impahla amahembe e-polyester asheshayo esheshayo wokukhangisa we-marathon kanye nomkhankaso wokhetho abakhiqizi be-sublimation abenziwe ngokwezifiso nabaphakeli | RE-HUO
Amahembe e-polyester asheshayo ashibhile wokukhangisa we-marathon kanye nesikibha sokhetho olwenziwe ngokwezifiso
Uhlobo lomkhiqizo: Isikibha se-Sublimation
Le ndwangu yesikibha ilungele ezemidlalo, ukukhangisa, imarathon, nemisebenzi yeqembu.
Uma okungenhla kungenayo indwangu oyifunayo, futhi sinensizakalo eyenziwe ngezifiso, singakwazi ukwenza ngezifiso izindwangu ngokuya ngezidingo zakho, udinga kuphela ukuhlinzeka ngesampula lendwangu, Sizokwenza ngokwezifiso zakho ngokusho kwendwangu hlinzeka, i-MOQ yezindwangu ezenziwe ngezifiso ngama-2000 T-shirts.
Ungakhetha indlela eyodwa noma eziningi zokuphrinta ukwenza isikibha sakho sibe semfashinini.
Uthumela umklamo wakho kithi futhi sizowuphrinta ngokuya ngesicelo sakho, Uma ungazi ukuthi ungasenza kanjani isikibha
Sinikezela ngenkonzo yelebuli namathegi enziwe ngokwezifiso, okwenza izikibha ngomkhiqizo wakho.
Langaphambilini Ku-Stock Sports isikibha Esingenalutho Sokugijima Esisheshayo Samadoda T Shirt seMarathon
Olandelayo: Isitolo esidayisa yonke impahla ezishibhile zebhola likanobhutshuzwayo ukuqeqeshwa kweqembu lebhola lebhola lebhola lebhola basketball ukuqeqeshwa kweVests Training
Ukotini imikhono emifushane izingubo abayitoho oversize t s ...
Ukuqeqesha ama-Bibles Abadala Nezingane Eziphefumula Ngokushesha ...